फरीदको निधनमा शाहरुखकोे गल्ती छ कि छैन ? |
फरीदको निधनमा शाहरुखकोे गल्ती छ कि छैन ?
25 January, 2017 | Bhawana Pathak | 890 Views | comments
अभिनेता शाहरुख खान अहिले सिनेमा रईस प्रमोशनमा छन् । सिनेमाको प्रमोशनको लागि नयाँ शैली अपनाएर रेल यात्रा गरिरहेका शाहरुखको सोमबार अर्थात शुरुको दिनको यात्रा निकै दुःखद रह्यो । सोमबार राती साढे १० बजेतिर बदोडरा रेल्वे स्टेशनमा शाहरुख पुगेपछि त्यहाँ १० मिनेटको लागि रेल रोकीएको थियो ।
शाहरुख पुग्नु भन्दा अगाडि नै त्यहाँ उनको एक झलक पाउनको लागि मानिसहरुको भिड लागेको थियो । यहि भिडमा किचिएर फरीद खान पठान नामका व्यक्तिको मृत्यु भयो । उनको मृत्यु पछि हाल रेल्वे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । यदि अनुसन्धान पछि शाहरुख आउने समयमा अतिरिक्त प्रहरी बलको माग नगरिएको भए आयोजक माथि कानुनी कारवाही हुनेछ ।
मृतकको परिवारले उनको मृत्युमा शाहरुखको कुनै पनि गल्ती नभएको बयान दिएको छ । फरीद पहिले देखिनै मुटु रोगी थिए । त्यस कारण भिडमा च्यापिदा उनी निसास्सिएर निधन भएको हो । एक अन्र्तवार्तामा फरीदकी आमाले छोराको निधनमा शाहरुख र रईस टिमको कुनैपनि गल्ती नभएको बताएकी छिन् । छोरो भिडमा फसेका कारण निसास्सिएर निधन भएको उनले जानकारी दिएकी छिन् ।
त्यस्तै फरीदकी भतिजीले पनि फरीद पहिले देखि नै मुटु रोगी भएको र यसमा शाहरुखको कुनै गल्ती नभएको बताएकी छिन् । फरीदको निधन पछि भारतीय जनता पार्टीका नेता कैलाश विजयवर्गीय र मनोज तिवारीले शाहरुखको आलोचना गर्दै मृतकको परिवारका लागि शाहरुखले उचित क्षतिपुर्ती दिनु पर्ने माग राखेका थिए ।
सोमबार शाहरुख खान बडोदरा रेल्वे स्टेशनमा पुगेपछि त्यहाँ भागदौड मच्चिएको थियो । फरीदलाई भने शाहरुख आउने कुरा थाहै थिएन । उनी त त्यहाँ आफन्तलाई खाना पुर्याउन गएका थिए । उनका आफन्त पनि शाहरुख आएकै रेलमा थिए । तर उनी रेल स्टेशनमा पुगेकै समय शाहरुखले आफ्नो टिशर्ट र बल फ्याँके जसलाई समात्न मानिसहरु तँछाडमँछाड गर्न थाले । यहि क्रममा किचिए र उनको निधन भएको हो ।
#फरीदको निधनमा शाहरुखकोे गल्ती छ कि छैन ?